Carl Blog Global Blog
Carl Henry Global - Sida aan ku caawin karno - fursadahaaga!
Markaad go'aansato inaad isku duwo nidaamka internetka waxaad u baahan kartaa caawimaad iyadoo ku xiran heerka aqoontaada, waxaad leedahay 3 fursadaha ugu muhiimsan;
U raadso qof inuu ku tuso sida loo sameeyo macluumaadka sida kooraskan iyo warbaahinta taageeraya. Tani waa mid waxtar leh haddii aad haysato waqti badan oo aad ku barato oo aad doonaysid inaad yarayso maalgelinta bilowga ah ee aad sameyso.
DIIWAAN-GELINTA (Adigoo leh)
Soo hel qof ku siiya oo kula socodsiiya gargaarka aad u baahan tahay markii aad u baahatid. Tani waa fikir isu dheellitiran oo u dhexeeya waqtiga iyo lacagta loo baahan yahay in la bilaabo, waad qaban kartaa shaqada badankood waxaadna heli kartaa kaalmadeena kaliya sida aad ugu baahan tahay, ama, haddii aad u baahatid!
Qofna ha kuu dhigo 100%, tan tani waa qumman haddii dhaqaale la heli karo wakhtiina waa arrin adiga kugu habboon, sababtoo ah waxaan sameynaa wakhti kasta oo aan dhamaystiri karno shaqada mudada yar ee wakhtiga la qaban lahaa markii ugu horreysay .
Waxaan kaa caawin karnaa mid kasta oo ka mid ah kuwaan, kaliya nala soo xiriir Cinwaanka email Tan waxaa lagu dying from corruption. Waxaad u baahan tahay Add to view. si aad u ogaato wax badan.
Ammaankaaga si dhab ah ayaannu u qaadnaa!
"Waxaan si adag u qaadnaa amnigaaga" - Carl Henry Global ayaa kor u qaaday martigelinteena si aanu u noqonno bogga amniga - soo dhoweynta qaar ka mid ah fursadaha ganacsi ee super online !!